चाहना भए रातारात हुन्छ काम- चिनीयाँ राष्ट्रपतिका कारण दुलही जस्तै सिंगारिंदै काठमाडौं (फोटोहरुसहित) – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:26:24
जापानी समय : 03:41:24
चाहना भए रातारात हुन्छ काम- चिनीयाँ राष्ट्रपतिका कारण दुलही जस्तै सिंगारिंदै काठमाडौं (फोटोहरुसहित)
7 October, 2019 14:23 | राजनीति | comments | 65700 Views
काठमाडौं उपत्यकाको सडकको दूरावस्थाको चित्रण सदनदेखि सडकसम्म सधै भैरहे पनि सधारको खासै पहल नभैरहेका बेला चिनीयाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भएपछि रातारात काठमाडौं दुलही जस्तै सिंगारिंदैछ ।
ठेकेदारले समयमा काम गरेन, सार्वजनिक खरीद ऐनले झण्झट निम्त्यायो भन्ने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरुको भनाईकाबीच मुलुकमा विदेशी पाहुनाको भ्रमण हुने भएपछि भने रातारात सडक पिच गर्ने, रंगरोगन गर्ने र फुबारी बनाउने काम युद्धस्तरमा हुन्छ ।
अहिले राजधानीका सडक सिँगार्ने, नयाँ बिरुवा रोप्ने, सडकका किनारमा लगाइएका बिरुवा काँटछाँट र गोडेमेल चलिरहेको छ । राजधानीको मुटुमा रहेको तीनकुनेलाई नयाँ आकार दिन रामचन्द्र बस्नेत र उहाँको समूह लागिपरेको छ । कल्की, पाम, धुपीका बिरुवा रोपिएका छन् । विभिन्न प्रजातिका फूल रोपिएको छ । काठमाडौँ महानगरका कर्मचारी पनि उत्तिकै मेहनत गरिरहेका छन् । कोही ढुङ्गा मिलाइरहेका छन् भने कोही बिरुवा रोपिरहेका छन् । “त्यो बिरुवा अलिक ठाडो बनाएर रोप्नु पर्‍यो”, दुबोको चपरी मिलाइरहेका एक कामदारले आफ्ना सहकर्मीलाई भने, “सबै बिरुवा र फूल मिलाएर रोप्नुपर्छ के ? अनि पो राम्रो हुन्छ त ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाको बा १ ग ३३९९ नम्बरको ट्याकङ्र उनीहरूको अगाडि रोकियो । भर्खरै टाँसिएको दुबोको चपरीमा पानी सिञ्चन गर्न थाल्यो । “अलिक मिलाएर है, अलिक मिलाएर, ट्याङ्करका चालकले पानी सिञ्जन गर्न लाग्दै गर्दा अर्का कामदारले भने, राम्रो हुनुपर्छ, पानी हाल्दा बिरुवा ढल्केलान् नि ! आफ्नै छोराछोरीजस्तै माया लाग्छन् यी बिरुवाका पनि”, परिचय दिनभन्दा आफ्नै काममा व्यस्त देखिए ती कामदार ।
चिनीयाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको यही असोज अन्तिम साता हुने भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँका सडक तथा विभिन्न क्षेत्र फूलका बिरुवा रोपेर सिँगार्न पाउँदा आफूलाई पनि खुशी लागेको बस्नेतको भनाइ छ । “दैनिक रु दुई हजारमा पनि कामदार पाउन गाह्रो छ । काम धेरै भए पनि दशैँको टीकाको भोलिपल्टसम्म त सकिएला कि ?”, बस्नेतले अनुमान गर्नुभयो । शिवपुरी नर्सरी सञ्चालन गर्दै आउनुभएका बस्नेतले चाडबाडको समयमा पनि राज्यले दिएको काम गर्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको बताउनुभयो ।
यस्तै काठमाडौँको न्यूरोडमा फूलका बिरुवा रोपेर पानीका फोहरा निर्माणको कामसमेत चलिरहेको छ । धुलो भएको क्षेत्रमा बढार्ने र रङरोगनको काम तीव्र पारिएको छ । मजदूरहरू दशैँ नभनी माइतीघर मण्डलालाई सजाउन व्यस्त भएका छन् । मण्डलामा पनि विभिन्न प्रकारका रङको संयोजन गरिएको छ । नगर सजावटको काम भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको छ । टीकाको भोलिपल्ट सम्ममा बोटबिरुवा रोप्ने काम सक्ने योजना रहेको तीनकुनेमा फूल रोप्दै गरेका एक मजदुरले जानकारी दिनुभयो । सजावटमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू खटिएका छन् ।
विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिहरू नेपाल आउँदा यसैगरी सिङ्गार्ने गरिएको थियो । सडक पुल निर्माणाधीन क्षेत्रमा नेपालका प्राकृतिक सम्पदा तथा धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रका सुन्दर ठाउँलाई ‘फ्लेस प्रिन्ट’ गरी ‘वाल’ बनाएर सजाइएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, से फोक्सुन्डो ताल, विपी राजमार्ग, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथका ठूला ठूला तस्विर राखिएका छन् । सडक विभागले नियमितरूपमा नै गर्दै आइरहेको कालोपत्रे गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ ।
चिनीयाँ राष्ट्रपति सिको भ्रमणका लागि सरकारले तयारी थालेको छ । सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’मा बस्न भनिएको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई पनि आवश्यक पर्दा उपस्थित हुन भनिएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले उच्चस्तरका विदेशी पाहुन आउने भएमा सोहीअनुसारको सुरक्षा दिने गरी तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।